VaBiti Vanoti Hupfumi Huchawedzera neZvikamu Zvipfumbamwe Kubva muZana
Gurukota rezvemari VaTendai Biti, vati mari ichashandiswa nehurumende gore rino inogona kushomeka nemari inosvika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mashanu emadhora, $750m nekuda kwekuti mari iri kuwanikwa nehurumende pamwedzi ishoma pane yavainge vakatarisira.
Vachitaura muparamande neChipiri apo vaiparura hurongwa hwemashandisirwo emari nehurumende hwepakati pegore kana kuti "Mid Term Fiscal Policy Review", VaBiti vatiwo pane zvimwe zvakati kuti zvange zvisina kugadzirirwa muhurongwa hwemashandisirwo emari achaitwa, zvakaita sekutengwa kwechibage, mari yekubatsira vana vanoshaya, kunyorwa kwebumbiro remutemo yenyika idzva pamwe nezvimwe zvakadaro.
Vatiwo zvimwe zvichakonzera kusakwana kwemari iyi, kuwedzerwa kwakaitwa mihoro yevashandi verumende vakati kunyange hazvo bazi rezvemigodhi rakati richavapa US$167 million kusvika pachapera gore rino, mari iyi haikwani kubhadhara vashandi. Vati nekudaro hurumende inotofanira kutsvaga mari kuti zvese zvinoda kuitwa uye kubhadharwa zvikwane.
VaBiti vapawo nzira dzakati kuti dzinofanira kutorwa nehurumende kuti
ikwanise kuchengetedza mari, zvakaita sekuderedza nzendo dzekunze, pamwe nekumbomisa kupinza vanhu mabasa muhurumende.
Vatiwo vashandi vasina zvavari kuita muhurumende kana kuti maghost workers vanofanira kumiswa basa uyewo kuti mari yese iri kubva pakutengeswa kwemangoda inofanira kupinzwa muhomwe yehururmende.
VaBiti vati pari zvino hapana anoziva kuti mari iri kubva kumangoda aya iri kufamba sei. Vati mitero kana kuti duty pazvinhu zvakaita seupfu nemafuta, hembe neshangu, yadzorwa nechinangwa chekuchengetedza makambani emuno ayo vati ave kuita zviri nani.
Vatiwo hurumende yaisa parutivi US$40 million semari yekubatsira makambani akavhara kana ari kunetseka mumadhorobha nemaguta akaita seBulawayo, Mutare neMasvingo.
Vati kunyange hazvo hupfumi husiri kunyatsofamba nenzira yavanoda, vane chivimbo chekuti huchakura nezvikamu zvipfumbabwe kubva muzana kana kuti 9 % sezvavakatarisira mubhajeti ravo regore rino.
VaBiti vati kuti zvinhu zvifambe munyika vanotungamira nyika ino, VaMorgan Tsvangirai naVaRobert Mugabe vanofanira kushanda pamwe chete pakutevedzera hurongwa hwehurumende kana bhajeti ravenenge vabvumirana.
Nyaya in Irwin Chifera